DEG-DEG: Man United Oo Dhaq-Dhaqaaqii Ugu Cuslaa Ka Wada Suuqa & Xiddigii Ay Jamaahiirteedu Ku Riyoonayeen Oo Ciyaaryahan Red Devils Ah Noqday - Gool24.Net
DEG-DEG: Man United Oo Dhaq-Dhaqaaqii Ugu Cuslaa Ka Wada Suuqa & Xiddigii Ay Jamaahiirteedu Ku Riyoonayeen Oo Ciyaaryahan Red Devils Ah Noqday
Kooxda Manchester United ayaa u muuqata mid hadda uun hurdada ka kacday marka ay noqoto dhinaca suuqa kala iibsiga xagaagan 2020 iyagoo saacadaha ugu dambeeya ee suuqaas samaynaya dhaq-dhaqaaqyo xoogan oo dhab ah.
Haddiiba ay Red Devils mudo dheer kaliya kusoo dhammaysteen saxeexa Donny Van De Beek isla markaana ay saxeexyo badan ku fashilmeen, Manchester ayaa hadda mudo 24 saac gudahood ah saxeexii labaad gacanta ku dhigay.
Man United ayaa xalay dhammaysay saxeexa Edinson Cavani oo hadda soo gaadhay magaalada Manchester isla markaana isla haatan heshiis buuxda kooxda FC Porto kala gaadhay saxeexa daafaca bidix ee ree Brazil ee Alex Telles.
Man United ayaa Porto kula heshiisay lacag dhan 18 Milyan oo Pound oo ay ku helayaan 27 sano jirkan daafaca bidix waxaana lagu wadaa inuu isla caawa tijaabada caafimaadka u mari doono kooxdiisa cusub.
Awooda ciyaareed gaar ahaan mida weerarka ee Telles ayaa kamida waxyaabaha sida weyn usoo jiitay Manchester United xilli uu xiddigani 13 gool iyo 12 caawimo kasoo sameeyay tartamada oo dhan xilli ciyaareedkii hore.
Telles ayaa sanadkii 2016 lacag 6 Milyan oo Pound ah ugu biiray FC Porto isaga oo tan iyo wakhtigaas kamid noqday xiddigaha daafaca ugu wanaagsan horyaalkaas, waxa uu guud ahaan kooxdiisa u ciyaaray 194 kulan isaga oo 56 caawimo iyo 26 gool kasoo qayb qaatay.